Ngophuhliso lwetekhnoloji, ukuvela kweTouch All kwiKiosk enye kwenza ubomi babantu bube lula kwaye bakrelekrele ngakumbi. Nangona kunjalo, itekhnoloji ikrele elijikeleze kabini. Ngokwanda kwenani leemveliso, intengiso iqala ukubonakala ingalunganga, kwaye ngakumbi nangakumbi kuvela iimveliso, zisenza umgangatho ungalingani.
Ke unokukhetha njani isixhobo esineendleko?
1. Isikrini sokuchukumisa se-LCD
Isikrini sokuchukumisa se-LCD sisetyenziswa rhoqo kumatshini, ngenxa yoko umgangatho waso ubalulekile. Ixabiso lentengiso eyaziwa ngokuba yi-LCD ye-LCD eyaziwa ngokuba yi-LCD ingaphezulu kancinci, kodwa imbonakalo kunye neziphathekayo zahlukile. Isikrini se-LCD esemgangathweni ngokuqinisekileyo kukusilela koomatshini bonke ngexesha lokusebenzisa. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa umgangatho wesikrini sokuchukumisa ikwayesitshixo esikrinini. Okwangoku, kukho ukuchukumisa okuchukumisayo, ukubamba okuchukumisayo kunye nokuchukumisa okuthengayo kwimarike. Esona sidumileyo sisininzi sokunxibelelana ngeendlela ezininzi, ubuntununtunu bokuchukumisa buphakeme kakhulu, kwaye ukuchukumisa okubambekayo nako kuhle kakhulu. Abasebenzisi kufuneka bakhethe ngokweenjongo zabo kunye neemfuno zabo xa besenza ukhetho.
2. UkuSebenza koMveliso
Ukongeza ekusebenzeni kakuhle komatshini, ukusebenza kwayo kunye nokusebenza kwemveliso kubaluleke kakhulu. Umatshini wokudibanisa umatshini sisixhobo semveliso esidibanisa ikhompyuter kunye nomboniso, kwaye isoftware ehambelana nayo ilungiselelwe ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi. Emva koko jonga kuqala ukuqaqamba, isisombululo kunye nexesha lokuphendula kwesixhobo kunye nolungelelwaniso lomamkeli xa uthenga. Okwesibini, jonga umsebenzi wesoftware yokuchukumisa ukubona ukuba ayazifezekisa na iimfuno zethu.
Kumthengi, ukuthengwa asisixhobo nje esilula, ukuthengwa kukuchukumisa umenzi we-kiosk nganye. Ke ngoko, kule nkqubo, kufuneka sivavanye ngokupheleleyo umgangatho wenkonzo yomenzi wokuqinisekisa ukuba akukho zinkxalabo kwinkqubo yokusetyenziswa kwexesha elizayo.
Isishwankathelo, sidityaniswe namanqaku amathathu ale ngongoma ukuze siwathelekise, ngokuqinisekileyo siya kuthenga izixhobo ezinemveliso ezingabizi mali ininzi.